ALEXIS WAYAN, Qoraa TELES RELAY
Mareykanka gudahiisa, NGO-yada ayaa cambaareeyay in ilmo-galeenka si qarsoodi ah looga soo saaro xeryaha ...
Shan NGO oo Mareykan ah ayaa gudbiyay cabasho ay ku cambaareynayaan astaamaha hysterectomies ee xarunta dadka lagu hayo ee dumarka muhaajiriinta ah lagu hayo. Qalliinadan ayaa lagu fulin doonaa iyaga oo aan rabin. Waa…
Aljeeriya: Weriye Khaled Drareni waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah!
Qareenkiisa ayaa horay u shaaciyay racfaan lasiin ah oo loogu talagay weriyaha Algeria ee wariyeyaasha aan xuduuda lahayn. Weriye Khaled Drareni 6-dii Maarso, 2020. | RYAD KRAMDI / AFP Waa la xiray illaa Maarso 29, ...
Mareykanka: Hysterectomies aflagaado ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu sameeyay xabsi gaar ah oo ku yaal ...
Waa arin aad u xun oo saameyn ku leh dadka markii horaba si gaar ah u nugul. NGO-yada ayaa cabasho u gudbiyay dowlada Mareykanka waxayna cambaareeyeen isniintii tiro badan oo qalitaano ah oo lagu sameeyay dumarka soo galootiga ah oo la dhigay ...
indsay Lohan waxaa keenay cadaaladda guriga madbacadda HarperCollins!
Qoritaanka buuggu wuxuu qaadanayaa waqti, laakiin Lindsay Lohan waxay umuuqataa inay kudhagtay dib udhac aad u dheer. Tan iyo 2014, HarperCollins wuxuu sugayey qoraal gacmeedkiisa, si macno darro ah. Sidaas darteed, madbacadda ayaa gudbisay cabasho ka dhan ah ...
Caitlyn Jenner waxay ka qoomameyneysaa inaysan waalid fiican u ahayn 4 caruurteeda ah!
Kahor kala-guurkeeda jinsi ee 2015, Caitlyn Jenner nolosheeda waxay ku qaadatay inay dareento raaxo la'aan aqoonsiga lab ee loo xilsaaray markay dhalatay. "Marnaba kuma qanacsaneyn aqoonsigeyga, xitaa markii aan aad u
Miley Cyrus waxay waayo aragnimo xun kala kulantay baahinta warbaahinta furiinkeeda!
Dhacdadii ugu dambeysay ee barnaamijka 'Podcast' ee Joe Rogan, Miley Cyrus waxay dib u milicsatay furiinkeedii Liam Hemsworth. Oo maqalkiisa, arrimuhu si dhab ah ugama ay muuqan sida ay warbaahintu u soo bandhigtay. "Runtii maxaa ku dhuuqaya arrintan ...
Amiir Andrew: kama qeyb geli doono dabaaldega 100 sano ee aabihiis Philip!
Qoyska boqortooyada waxay damacsan yihiin inay sameeyaan wax kasta oo ay ku ilaalinayaan sumcadooda. In kasta oo Amiir Andrew uu wali ku dhex milmay arinkii Epstein, hadana mar kale ayaa laga mamnuucay dhacdo rasmi ah oo qoys. Amiir Andrew ...
Neymar oo careysan: xiddigu wuxuu ku eedeeyay laacib OM ah cunsuriyad!
Labada xiddig ee sida weyn loo sugayay ee udhaxeeyay PSG iyo OM waxay ahayd mid aad uxiiso badan Axadii, Sebtember 13, 2020. Ma aysan dhicin ...
Toddoba ilaa siddeed: marag kaca ah ee hooyadeed ilmaheeda "qufulan ...
Axad Sebtember 13, 2020, sawirka Toddoba ilaa Siddeed waxaa loo hibeeyay Chrystelle, oo ah hooyo wiilkeeda 8 jirka ah uu ku qanacsan yahay inay tahay gabar ku xiran jirka wiil. Dhaqaaqday, tan dambe waxay ku noqotay raaxo la'aanta ilmaheeda ...
1 2 3 ... 16 soo socda